Mubatanidzwa weMDC Alliance Woita Zinyekenyeke
Vatungamiri vemamwe mapato ari mumubatanidzwa weMDC Alliance. (Mufananidzo: MDC)
Mubatanidzwa weMDC Alliance unonzi watarisana nematambudziko kuburikidza nekunetsana kunonzi kuri kukonzerwa nenyaya yekusaremekedza chibvumirano chakaumba mubatanidzwa uyu nevamwe vari mubato reMDC-T.
Izvi zvinonzi zviri kubva mukuramba kunonzi kuri kuitwa nevamwe mubato iri kutambira hurongwa hwekuti vasakwikwidze mune mamwe matunhu akapiwa mamwe mapato ari mumubatanidzwa uyu pakagovanwa nzvimbo dzekumirira.
Izvi zvinonzi zvaitawo kuti mubato reMDC-T, iro rinotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, muite zinyekenyeke. Hondo yakadi inonzi iri mudunhu reHarare East, umo munonzi mutungamiri webato rePDP, VaTendai Biti, nemutauriri weMDC-T, VaObert Gutu, vari kunzi vose vanoda kukwikwidza mudunhu iri.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti uyu mucherechedzo wekuti mubatanidzwa uyu hauna kusimba uye kune vakawanda vasiri kuutsigira asi vasati vabuda pachena. Vabiti naVaGutu vakaramba kutaura nezvenyaya iyi.
Asi mutauriri werimwe bato riri mumubatanidzwa weMDC Alliance, reMDC inotungamirirwa naProfessor Welshman Ncube, VaKurauone Chihwayi vanoti semumwe ari muboka rezvekuburitswa kwemashoko mumubatanidzwa uyu, havasati vanzwa nezvenyaya iyi, asi vachiti kana chiri chokwadi kuti pane vasiri kutevera zviga zvebubatanidzwa nyaya dzavo dzichatarisiswa.
“Kana uri nhengo yemapato manomwe ari mumubatanidzwea weMDC Alliance, chandinoziva ndechekuti hautenderwi kukura musoro wobva wandomira woga uchizama kukanganisa hukama huripo pamapato manomwe, uchikanda zita rako mu hat kunzvimbo yakapiwa rimwe bato. Izvozvo ndozviri mu agreement. Asi kana chiri chokwadi chamuri kutitaurira, takachibata tinoenda ku Alliance tondo addressa ma problems edu ikoko.”